ကြာပန်းလေးက စခဲ့တာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ကြာပန်းလေးက စခဲ့တာ
Posted by ဆူး on Feb 25, 2012 in My Dear Diary | 38 comments
ဆူး စိတ်ကူး ကြာပန်းလေးက စခဲ့တာ
အိမ်မှာ ကြာပန်းလေးတွေ ရောင်စုံ စိုက်ပျိုးခဲ့တာကတော့ အသိတယောက်က စပြီး အပင်လေးတွေ လက်ဆောင်ပေးတာကနေစပြီးတော့ အိမ်မှာ ကြာပင်လေးတွေ စိုက်ပျိုးခဲ့တယ်။ ပန်းပင်တွေ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေကို ရောက်ရင် အိမ်မှာ မရှိသေးတဲ့ အရောင်လေးတွေ ရှာဝယ်ခဲ့တယ်။ အရူးထခြင်း တမျိုးဖြစ်မှာပေါ့။ ရွှေဂုံတိုင်က တော်ဝင်နှင်းဆီ စားသောက်ဆိုင်မှာ မနက်စာ သွားစားခဲ့ရင်လည်း အ၀င်အထွက်တိုင်းမှာ ပွင့်လန်းနေတဲ့ ကြာပန်းပင်လေးတွေကို အားကျမိတယ်။
ကြာပန်းလေးတွေရဲ့ သဘာဝက မနက် နေရောင်ခြည်မှာ ပွင့်လန်းကြပြီးတော့ ၁၂နာရီ ကျော်ရင်တော့ ကြာပန်းလေးများ ပြန်ငုံသွားတတ်ပါတယ်။ အပွင့် တခါပွင့်ရင် ၅ရက် မှ ၁ပတ်လောက် အထိ ခံပြီးတော့ မနက်ပွင့်လိုက် နေစောင်းသွားရင် ပြန်ငုံ သွားလိုက်နဲ့ အပွင့်တပွင့် ပွင့်လို့ မဆုံးခင်မှာတင် နောက်ထပ် အပွင့် တပွင့်က လိုက်လာတဲ့ အတွက် တပွင့် မရှိတော့ရင် နောက်တပွင့်က ပွင့်ပေးနေတဲ့ အခါ အမြဲတန်း ပန်းပွင့်နေတဲ့ ပန်းအိုးကလေး ဖြစ်နေတာကလည်း ကြာပန်းပင်လေးရဲ့ ဆွဲဆောင်မှု နဲ့ အလှအပ တရားတခုလို့ ဆိုရမလားပဲနော်။
မနက် အိပ်ယာ နိုးတဲ့ အချိန် အိမ်ရှေ့ကို ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ ရေနဲ့ ကြာပွင့်လေး ပွင့်နေတဲ့ အိုးကလေးတွေက ကျက်သရေ ရှိတယ် လို့ ခံစားရတယ်။
စိတ်အတွေးအယူအဆ ဆိုပေမဲ့ ကောင်းတဲ့ စိတ်နဲ့ တွေးတော့ စိတ်ကြည်လင်မှုကိုတော့ ဖြစ်စေတယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။
ကြာပန်း စိုက်ပျိုးနည်းက သိပ်တော့ မခက်ခဲလှပါဘူး။ အပေါက်မပါတဲ့ ပန်းအိုးကြီး တစ်အိုးထဲကို အင်ဒုံလေးထဲ ရွံ့နှုန်း နဲ့ အတူ ကြာပင်လေး စိုက်ထားရင် ဖြစ်ပါတယ်။ ရေကန်ကြီးထဲမှာလို မြေနေရာ ကျယ်ကျယ် မဟုတ်တဲ့ အတွက် အမြဲပွင့်ပြီး လန်းဆန်းနေအောင်တော့ ကြာပန်းတွေမှာ ထည့်တဲ့ အားဆေးလေးကို တပတ် တစ်ကြိမ် ရွံ့ ထဲမှာ မြုပ်ပေးရတယ်။ အဲဒီ ဆေးပြားလေးတွေ မြေပဒေသာ ကျွှန်း ရောက်ရင် ကဒ်တွေ အများကြီး တစ်ခါတည်း ၀ယ်ထားပြီး တစ်ပတ် တစ်ကြိမ် အချိန်ပေးပြီး အားဆေးကျွေးပါတယ်။ ဆေးမပြတ် ကျွှေးတဲ့ အတွက် အမြဲကို လန်းဆန်းပြီး ပွင့်နိုင်နိုင်တာလို့ ဆိုရမှာပေါ့။
ခြံထဲမှာ သစ်ပင်ကြီးတွေ မိုး သွားလို့ အဆင်မပြေတာနဲ့ ခြံ အပြင်ထုတ်ထားတော့ ဖြတ်သွားတဲ့ လူတိုင်းက အပွင့်လေးတွေ ကြည့်သွားတာကို အထဲကနေကြည့်ပြီး ပီတိ ဖြစ်မိတာကလည်း တစ်မျိုး စိတ်ချမ်းသာတယ်။ တခါတရံ အိမ်နီးနားခြင်းတွေကလည်း ပန်းတွေ အမြဲပွင့်တာ ငါတို့ ဖြတ်သွားတာ မြင်တဲ့ သူတွေတောင် စိတ်ချမ်းသာတယ် နင်တို့လည်း ပန်းတွေ အမြဲ ပွင့်တော့ လာဘ်ကောင်းတာပေါ့ လို့ ပြောသံ ကြားရင် သိပ်ဝမ်းသာ မိတယ်။ ပန်းပျိုးသူ ပီတိ ဆိုတာ ဒါမျိုးကို ပြောတာ ဖြစ်မှာပေါ့လေလို့ တွေးမိတယ်။ အတွေးတွေ လှပြီး ကြည်နူးပေမဲ့ သဘာဝ ကတော့ သဘာဝပဲပေါ့ ရေ နဲ့ ကြာ ဆိုပေမဲ့ ကြာပင်လေးတွေ ရေညှိစွဲတာမျိုး ရေညှိလေးတွေ အကြောင်းပြုပြီး ခရုတွေပေါက်ပြီး အပင်တွေကို ၀ါးစား ကိုက်ဖျက်တာမျိုးတွေ ရှိပြန်ပါသေးတယ်။ ၁ပတ် တခါ ပန်းပင်လေးတွေ အားဆေးထည့်တဲ့ အချိန် ရွံ့ ထည့်ထားတဲ့ အင်ဒုံလေးကို အပြင်ထုတ်ပြီး ရေထည့်ထားတဲ့ ပန်းအိုးကြီးကို ဘရပ်နဲ့ ရေညှိကုန်အောင် တိုက်ချွတ်ဆေးကြောတဲ့ အလုပ်ကလည်း တာဝန် တခုလို ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ အပင်မှာ အပွင့် ဘယ်လောက် လှလှ ရေကြည်နေမှ တင့်တယ်မှာ မဟုတ်လား.. ဒါကတော့ လုပ်ရမှာပေါ့လေ.. ဖြစ်သင့်ပါတယ်လေ.. ရေကန် မဆေးတာ ကြာရင်တော့ ခရုပေါက်ပြီး အပွင့်တွေ မျိုးတုန်း ကုန်မပေါ့.. ရေကန်ကတော့ အချိန်မှန် လဲပေးသင့်ပါတယ်လေ.. ဒီလိုနဲ့ တပတ် တပတ် နဲ့ လုပ်ခဲ့တာ ကိုယ်တိုင် မဟုတ်တော့ မသိသာခဲ့ဘူး။ နှစ်ပေါင်းများစွာ တူတူ နေထိုင်လာတဲ့ ကလေးမလေးက မဲပေးဖို့ အတွက် ရွာမှာ မှတ်ပုံတင် လုပ်ပေးနေတယ် ဆိုတော့ သွားလုပ်ချည် ဆိုပြီး အပြန်လက်ဆောင် မုန့်ဖိုးနဲ့ လစာ ၆လ စာလောက် ကြိုပေးလိုက်တယ်။ သူကလည်း လိုလို လားလား ပြန်လာပါမယ်ဆိုတော့ နေ့စဉ် မြင်တွေ့ နေရတဲ့ သံယောဇဉ်နဲ့ စိတ်ဓါတ် ကို သဘောပေါက်လို့ မညိုမညင် ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူပြန်သွားတော့ ကြာအိုးတာဝန် ဆူး ဘက်လှည့်လာပါတော့တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ကောင်မလေးက အဝေး ရောက်ပြီ ဆိုတော့ အကြောင်းပြချက် မျိုးစုံနဲ့ မလာနိုင်တော့ဘူး ဆိုတော့လည်း ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ ကိုယ့် အိမ် အလုပ်တော့ ကိုယ်လုပ်ရမှာပဲ ဆိုတဲ့ အသိစိတ်နဲ့ ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ ကိုယ့်ဘ၀ အခြေအနေ ကိုယ့်အား ကိုကိုးမှ ကိုယ်သာ အရှင် ဖြစ်မယ် ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး အတိုင်း လုပ်ရအုန်းမပေါ့ကွယ် ဆိုပြီး လုပ်ရတော့တာပေါ့။
တပတ်တခါ ကြာအိုးတွေ သန့်ရှင်းရေးတွေလုပ်ရင်းနဲ့ အတွေးတခုက ၀င်လာတာမှ လင်းကနဲ ကို ဖြစ်သွားတယ်။ ဘန်ကောက်မှာ လမ်းမတွေမှာ ကြာအိုးတွေ ချ ထားပြီးတော့ ရေညှိ မရှိပဲ ပန်းလေးတွေ ပွင့်နေတာ တွေ့တော့ ဒီလို နေရာမျိုး ဘယ်သူမှ သန့်ရှင်းရေး လာလုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး အဆင်ပြေနေတာ ကြာအိုးထဲမှာ ငါးထည့်ထားလို့ ဖြစ်ရမယ် ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ငါးမွေးချင်စိတ်ပေါက်သွားပါတယ်။ တစ်ချက်ခုတ် ၂ချက် ၃ချက် ပြတ်ပြီလို့ကို တွေးလိုက်မိပါတယ်။ ငါးရဲ့ သဘာဝက ရေညှိကြိုက်ပါတယ်။ အဲဒိ ရေညှိကို သီးသန့် ခပ်ထားလိုက်ရင် အလိုလို သဘာဝအတိုင်း တီကောင် နီနီလေးတွေ ပေါက်လာပါတယ်။ ဒါကတော့ သဘာဝ ဖြစ်တည်မှု ကို တွေ့ရှိမှု သက်သက်ပါ။
ငါးရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေ သွားပြီးတော့ ငါးတွေ လိုက်ကြည့်ရတာ အမောဖြစ်ခဲ့ပြီပေါ့။ ငါးဆိုင်မှာ ဟိုမေး ဒီမေး အိမ်ရှေ့မှာ ကြာကန်ထဲမှာ ငါးတွေ ထည့်ထားမှာ မို့ အသက်ပြင်းပြီး ဒဏ်ခံနိုင်ရည် ရှိတာလေး ပေးပါဆိုပြီး မေးမြန်းတော့ ဆိုင် အရောင်းစာရေး ကောင်လေးက ဒေါင်းငါးကို လက်ညိုးညွန်တယ်။ ဒါနဲ့ အထီး ၂ကောင် အမ ၂ ကောင် ပေးပါ ဆိုပြီး ၀ယ်လာခဲ့လိုက်တယ်။ အိုးတိုင်းမှာ ငါး ၂ကောင်စီ ထည့်မယ် အရင် ထည့်ထားမယ် တခြား အိုးတွေကိုတော့ မထည့်သေးဘူး အခြေအနေ စောင့်ကြည့်မယ် ဆုံးဖြတ်ထားလိုက်တယ်။ မနက်မိုးလင်းတိုင်း အပြေး အလွား ငါး အကောင် ရေ စစ်ရတဲ့ အလုပ်တခု ပိုလာခဲ့ပါတယ်။ ဆိုင်က ကောင်လေးက မှာလိုက်ပါတယ် ဒီဒေါင်းငါးက ဗိုက်ပူနေတာ မကြာခင် ပေါက်လိမ့်မယ်။ ဗိုက်ပူ နေတဲ့ ဒေါင်းငါး ကို ကြည့်ရင်းနဲ့ ဘယ်တော့ ပေါက်ပြီး များလာ မလဲ ဒါပဲ စောင့်ကြည့်နေရင်းနဲ့ မိုးရွာတဲ့ အခါ ကြာကန် ရေလျှံတော့ သူတို့ ပျော်တယ် ထင်ပါရဲ့ ခုန်ပေါက်ရင်းနဲ့ အောက်ကျပြီး သေသွားရှာတယ်။ ငါးအကောင်ရေ မများလာပဲ နည်းနည်း သွားလိုက်တာ အမ တစ်ကောင်ပဲ ကျန်တော့တယ်။ သူ အားတက်အောင် နောက်ထပ် ငါး အထီ အမ လေးတွေ ၀ယ်ထည့်ပေးရင် ကောင်းမလား တွေးနေရင်းနဲ့ မိုးတွေ အုံ့လာရင် မိုးမရွာခင် ကြာအိုး ရေလျော့မှ ဖြစ်မယ် ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ရေတွေ ခပ်နဲ့ ခွက်ပြီး လျော့ရတဲ့ အလုပ်တခု ပိုတိုးလာပြန်ပါတယ်။ ငါးအထီး တကောင် သွားဝယ်ပြီး ထည့်ပေးလိုက်ပြီး မကြာခင်မှာ ဒေါင်းငါး အကောင်လေးတွေ အများကြိးပေါက်ကတော့တယ်။ ငါးတွေ ဘယ်အချိန်က ပေါက်နေမှန်း မသိပေမဲ့ သတိတရ ရှိတဲ့ အချိန်သွားကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ ငါးတွေ ပေါက်တာ မြင်ပြီး ငါးမကြီး မတွေ့တော့ပါလား ရှာဖွေရင်းနဲ့ ပန်းအိုးကြားထဲမှာ ငါးကလေး ရေပြတ်လို့ သေရှာနေခဲ့ပြီ။ ငါးသားပေါက်ကလေးတွေ အများကြီး ကျန်ခဲ့တော့ နေ့တိုင်း အစာကျွှေး သဘာဝ ရေညှိစားရင်းနဲ့ ငါးတွေ နည်းနည်း ကြီးလာတဲ့ အခါ ပုလဲငွေရောင် လက်လက် ထ နေတဲ့ ဒေါင်းငါး မကြီးက ပေါက်တဲ့ ငါးကလေးတွေက မဲမဲ သဲသဲ အဖြူ အမဲ အစက်အပျောက် တွေနဲ့ ဒေါင်းငါးတွေ ဖြစ်နေတာ သတိထားမိတယ်။
ငါးတွေ ရှိတော့ ကြာကန် ရေညှိမတက်ပေမဲ့ ငါးချီးတွေ များလို့ ကန်က ညစ်ပတ်ပြီး အနံ မကောင်းတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်တော့ အပတ်စဉ် ကြာကန်ရေဆေးပြီး ငါးချီးကို ပိုက်နဲ့ စုပ်ထုတ်တဲ့ အလုပ်ပိုလာပါတော့တယ်။ မိုးကလေးများ အုံ့ရင် ငါးကလေးတွေ ရေထဲ ခုန်ပေါက်လို့ အောက်ရောက်သွားမှာလည်း စိတ်ကပူရသေးတယ်။ အကောင် ၁၀၀ ၀န်းကျင်လောက် ရှိ သော ငါးကလေးများ သက်တမ်းတွေကလည်း တိုကြတော့ အရွယ်ရောက်တဲ့ ငါး အနေအထား ဖြစ်တဲ့ အခါ အကောင် ၂၀ လောက်သာ ကျန်ပါတော့တယ်။ အသက်ဖြစ်လာပြန်တော့လည်း အသက်ရှည်ဖို့ ဆိုတာ တော်တော် ခက်ခဲတဲ့ အရာပဲ ဆိုတာ သတိထားမိလာတယ်။ အရွယ်ရောက်တဲ့ ငါးကလေးတွေ ထုံစံ အတိုင်း ငါးပူတင်းလေးတွေလို ဗိုက်ပူနေတဲ့ ငါး နဲ့ ပိန်ပိန်ပါးပါး ငါး ဆိုပြီး သိသိသာသာ အထီးအမ ကွဲပြားလာပါတော့တယ်။ ငါးဗိုက်ပူကလေးတွေ ဘယ်တော့ ပေါက်မလဲ စောင့်သာ ကြည့်ရတယ် ငါးဗိုက်ပူ လေးတွေ တဖြုတ်ဖြုတ် နဲ့ လျော့ပါးသွားလိုက်တာ ငါးဗိုက်ပူ တစ်ကောင်ပဲ ကျန်တော့တယ်။ သတိထားမိတဲ့ အချိန်မှာ ငါးမလေး ဗိုက်ပူ ရေမကူးတော့ပဲ ငြိမ်သက်စွာ ရွံ့ပေါ်မှာပဲ ကြက်ကလေး ငှက်ကလေးများလို ၀ပ်နေတာ မြင်တော့ သူ နေမကောင်းဘူး ဆိုတဲ့ စိတ်ခံစားမှုကိုတော့ တွေးမိပါတယ်။ ထင်တာ မမှားဘူးဆိုရင် အရှေ့က ငါးမလေးတွေ ဗိုက်ပူလာပြီး ငါးကလေးတွေ မပေါက်ပဲ သေသွားကြတယ် ဆိုတော့ ငါးမပေါက်နိုင်လို့ သေသွားတယ် လို့ တွေးမိပြီး နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ ငါးမလေး ဗိုက်ပူကိုလည်း ရှင်သန်စေချင်တဲ့ စိတ်ကလေး ဖြစ်မိတာ အမှန်ပါပဲ။ ငါးကန်ထဲမှာ အထီးက အမ နောက်ကို တကောက်ကောက် လိုက်ပြီး တွတ်တာ မြင်မိတာရယ် အရှေ့က ငါးဗိုက်ပူလေးတွေ သေကုန်တာရယ် တွေးပြီး သီးသန့် ဖယ်ထားပေးထားလိုက်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်း ဆရာဝန် ကိုမေးတော့ ငါး သဘာဝ က အထီးတွေက အမ တွေ အမြန် ပေါက်နိုင်အောင် တွန်းအားပေးတဲ့ သဘောမျိုး ကူညီပေးတာပါ တူတူ တွဲ ထားမှ အဆင်ပြေမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ငါးမလေး ဗိုက်ပူ ရေတောင် မကူးနိုင်တာ အနောက်က လိုက်တွတ်တဲ ဒဏ်ခံနိုင်ပါ့မလားတွေးမိတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဘာလုပ်ပေးရမလဲ တွေးရင်းနဲ့ ကြံရာ မရ အကြံ တခုပေါ်လာခဲ့တယ်။ ပရိတ်ကြီး ပါဠိတော်မှာ ပါတဲ့ အင်္ဂုလိမာလသုတ် ရွတ်ပေးရင် ကောင်းမယ် ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ငါးမလေး ဗိုက်ပူ အတွက် ညနေစောင်း ကတည်းက သတိရတိုင်း ရွတ်ပေးခဲ့တာ ည ၁၁နာရီ အိပ်တဲ့ အချိန်အထိ အလုပ်တခုခု လုပ်ရင်းနဲ့ သတိရလိုက် ရွတ်ပေးလိုက် နဲ့ အချိန်တွေ ကုန်လွန်ပြီး အိပ်ယာထဲ အိပ်နေတာတောင် မသိစိတ်က ဆက်ရွတ်ပေးနေသလားတောင် ထင်မိတယ် ညဘက် ကိုလည်း ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်ခဲ့ပဲ သတိတခု စွဲကပ်ထားသလို နိုးတ၀က် အိပ်မက်လို ရွတ်ပေးနေလိုက်ရင်းနဲ့ မနက်လင်းတော့ မေ့မေ့လျော့လျော့ ဖြစ်နေပြီး အလုပ်သွားဖို့ ခြံထဲ ဆင်းကြည့်တဲ့ အခါ ငါးအကောင်ရေ ပေါင်းများစွာ ရေပေါ်မှာ ကူးခပ် နေတာ မြင်ရတော့ ဒီတခါတော့ အောင်မြင်သွားပြီလို့ တွေးပြီး ပီတိ ဖြစ်မိခဲ့တယ်။
သေချာတာကတော့ ဒီငါးမလေး အကောင်မပေါက်နိုင်လို့ သေသွားခဲ့တဲ့ သူ့ နဲ့ တူတူ ငါးဖြစ်လာတဲ့ သူ့ ညီအမ တွေ လမ်းကို မလိုက်ရတော့တာ အမှန်ပါပဲ။
ငါးကလေး ၅ကောင်က စပြီး ရှင်သန်ပွားများလာတဲ့ ငါးတွေဟာ ကြာကန်ထဲမှာ အကောင်ပေါင်း ရာနဲ့ ချီပြီး ကိုယ်ပိုင် ကမ္ဘာတခုလို ပျော်ရွင်စွာ နေထိုင်ရင်း နေ့စဉ် သခင် အလာကို မျှော်ကာ ခြေသံကြားရင်ဖြင့် မိုးပေါ်က ကျလာမဲ့ အစာမျှောပြီး ပျော်ရွင်စွာ ဆက်လက်ရှင်သန်နေထိုင်နေကြပါတယ်။
ခေါင်းမစားပါဘူး သူတို့တွေ ကြည့်တော့လည်း စိတ်ချမ်းသာမှု တမျိုးပါပဲ..
သံယောဇဉ် ဆိုတာ မတွယ်ရင် ပိုကောင်းတယ် တွယ်မိတွယ်ရာ တွယ်ပြီးရင် စိတ်ရှုပ်ရတယ်။
ကလေးမွေးတာကလည်း မြန်တယ် ရွာထဲက မစိန်ပေါက်လို ဟောတစ်ယောက် ဟောတစ်ယေက်ထွက်နေတာဗျ။
ဒေါင်းငါးတောင် ဆိုင်က ကောင်လေးက အသက်ပြင်းတယ် ဆိုလို့ ၀ယ်လာတာပါ။
ကန်ထဲမှာ ငါးတွေ ကြပ်နေရင် နေရခက်မှာ စိုးလို့ သေးတဲ့ ငါးမျိုးတွေ ၀ယ်ထည့်ထားတာလည်း ပါတယ်။ ကရိကထ မများဘူး ထင်လို့ ၀ယ်ထည့်ထားတာ..သူတို့ အလုပ်ချည်းပဲ လုပ်နေရတာ သိပ်တော့ မလွယ်ဘူး။
လပ်ကီးတော့ မမွှေး ပရစေနဲ့နော် သူ့ အတွက် တီကောင် နဲ့ ပိုးဟပ် သီးသန့် စီစဉ်ပေးရတာ မကောင်းဘူးလေ။
ဒီအဒေါ်ကြီးက ငါးတွေလဲ ချစ်တတ်ပါကလားဆိုပြီး အသိအမှတ်ပြုမိသွားတာပါရယ်လေ (မောင်ပေ့လေသံ)
ပန်းစိုက်တာတို့ ငါးမွေးတာတို့ပျော်စရာတော့ အကောင်းသားဗျ
များငယ်ငယ်က များဘကြီး အပင်စိုက်တာ မုန်ညင်းတို့ ချဉ်ပေါင်ရွက်တို့စားတဲ့အပင်တွေစိုက်တော့
အဲဗား ရေလောင်းခိုင်းတာ ၀တ္တရားတစ်ခုလိုဖြစ်ပြီး အပင်တွေ့ ရင် ရေလောင်းရမှာဆိုးလို့လန့် လန့် နေရတယ်..
၀ယ်စား ဘယ်လောက်မှ မရှိတာကို လာစိုက်ခိုင်းနေတာ အလုပ်ရှုပ်သလို ခံစားရတယ်ဂျ
အဲတော့..၀ါသနာပါရင် အီပန်းနေရတာတောင် ပျော်စရာကောင်းပါတယ်နော့ (သဂျီးလေသံ)
အိမ်မှာ ၁၂ရာသီ ကံ့ကော် စိန်တလုံး သရက် ပိန္နဲပင် နောက်ထပ်ကတော့ သစ်ခွ မျိုးစုံနဲ့ တနေ့က မျိုးစေ့ထုတ်တွေ ရောင်းတာတွေ့လို့ ကြက်ဟင်းခါးသီး စိုက်တာ အသီးသီးနေပြီ ၂လုံးတောင် ခူးပြီးပြီ။ ခရမ်းပင်လည်း စိုက်ထားတယ် မကြာခင် သီးတော့မယ် ထင်ပါ့။
တခြား ဘုစု ဇရုတွေ အပင်တွေကတော့ အားကြီးပဲပေါ့။
စိုက်ခင်း တခုလို လုပ်ရလောက်အောင် မြေမကျယ်လှဘူး ရှိတဲ့ မြေကြီး မှန်သမျှ ကွန်ကရစ်ခင်းထားတော့ ရှိတဲ့ နေရာ အလုအယက် စိုက်ရတာမို့။
ပဒုမ္မာ ရဲ့ ရေဆေးတဲ့အကြောင်း ကစခဲ့တာလို့ ထင်တာ..
ရွာထဲမှာက ဒီ e- အကြောင်း ဆက်တိုက် ပြောနေကြတာကိုး..
ပဒုမ္မာ က စဆေးတယ်..e tone က တွေ့ခဲ့တာတွေပြောတယ်…
fatty cat ကလဲ သူ့စွန့်စားခန်း ကိုပြောတယ်..
ဒါ့ကြောင့် မျက်စိ လည်သွားတာ…
အခုက နိုင်ငံတော်သစ် ရဲ့ လိုအပ်ချက်…
အခုတောင် ပဒုမ္မာကြာ မျိုးတွေ ထပ်ပျိုးထားတယ်။ ကြာပင် လိုချင်ရင် ပြော.. ပျိုးပေးမယ်။
တဖက်တလမ်းက နိုင်ငံ့ ရိက္ခာ ဖူလုံအောင် ကြိုးစား ကြတယ်…
ကျေးဇူးပါဗျာ.အုတ်ကြားပေါက်နေတဲ့ ညောင်ပင်လေးတောင် ရေမလောင်းဖြစ်လို့
ပြီးတော့ ရေအိုးထဲ မွေးထားတဲ့ ပိုးလောက်လန်းလေးတွေလဲ အစာမကျွေးဖြစ်တာ
ကြာလို့ သေကုန်ပြီလားတောင် မသိတော့ဘူး..
သတိရတုန်း ရေလောင်းပေါင်းသင်ပြီး လောက်လန်းလေးတွေလဲ အစာကျွေးလိုက်အုံးမယ်..
အော် ပျော်စရာကမ္ဘာလေးတစ်ခုကို ဖန်တီးပြီး စိတ်ကျေနပ်မှုရှာဖွေနေရတာ
ပျော်စရာ ကမ္ဘာက များလွန်းလို့ စိတ်ပျက်နေတယ်။
ရေထဲ လက်ချ လိုက်ရင် ငါးလေးတွေ လက်ကို လာလာ တွတ်တယ်။ ရွစိ ရွစိ နဲ့ ဘယ်လိုလေးလဲ မသိဘူး။ အလိုက်ကန်းဆိုး မသိတဲ့ အကောင်တွေ.. တော်တော် ဆိုးတယ်။
အစကရေထဲမှာမြက်မွေးဘူးတယ် (ပိုက်ဆံကုန်သလားမမေးနဲ့) အခုဒေါ့အလွယ်တကူငါးပဲမွေးတော့တယ် ငါးတွေဟာအပူချိန်၂၈ဒီဂရီမှာ
အသင့်တော်ဆုံးပါ အေးရင်ပူအောင်လုဎ်ပေးရသလို ပူရင်လဲအေးအောင်၂၈ဒီဂရီဖြစ်အောင်လုဎ်ပေးရတယ် အပူချိန်အလွယ်တကူအပြောင်း
ပွေလီရှုပ်နေတဲ့ လူ့ လောကတာဝန်တွေပိလာနေတာတာထက်စာရင်
ကျနော်ကတော့ ဘာမှ မ မွေးဘူးဗျာ။
အစ်မပဒုမ္မာ ဆီက ခွင့်ပြုချက်လိုပါမယ်ခင်ဗျာ။
၀င်ရောက်ဖတ်ရှု အားပေးသွားပါတယ် အန်တီဆူး ရေ။
ဆူးရေ ကြာပန်းလေးက စလိုက်တာ ငါးမွေး၊
ငါးမွေးရာကနေ အင်္ဂုလိမာလသုတ် ရွတ်ပေးရတဲ့ အထိကို ဖြစ်သွားပါရောလား။
သဂျီး အလိုအရ ပြောရရင် အဂုင်္လိမာလ သုတ်ရွတ်တာထက်
ငါးအတွက် အိုဂျီခေါ်ရမှာ မဟုတ်ဘူးလား။
တော်တော်ကို စိတ်၇ှည်တတ်တဲ့ဆူးပါလားနော်..။ကြာပန်းေ၇ာင်စုံတောင် စိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ …အားကျလိုက်တာနော်။
ကြာပန်းစိုက်တာ အမ ၇ဲ့ အမေက ၀ါသနာသိပ်ပါတာ..အိမ်မှာလည်းကြာပန်းပင်က ရှားရှားပါးပါးတပင်တောင်ရှိတယ်..စနစ်တကျ ဆူးလို ကြာပန်းကို စိုက်တတ်ဖို့ 
အင်း …. အာပျိုဂျီးဒွေ ငါးမွေးတော့ အတော် မထှော်မနန်း ကျသကိုး …
သွေးပူ(အဆင့်မြင့်) သတ္တ၀ါ နဲ့ …သွေးအေး(အဆင့်နိမ့်) သတ္တ၀ါ ရဲ့ ..ကွဲပြားချက်ဗျ…
အဆင့်နိမ့်သတ္တ၀ါမှာ အမ က အင်အားကြီး တယ် …အထီးက ဖလာ ..
ဆိုတော့ …ငါးလည်း ဒီသဘောပဲ ….
ဇဂါးစပ်လို့ပြောရရင် ရွှေငါး ဘယ်လို ဖောက်သလဲဆို အထီး ၃ကောင် အမ ၁ကောင်နှုန်းနဲ့ ဖောက်မှ
သားကျတာကောင်းပါတယ်ခည ..(ချို့တဲ့ ရှာတဲ့ ဖမ်းမ်တွေမတော့ အထီး၂ အမ ၁ နဲ့ ဖောက်တယ်…)
စာထဲမှာလည်း ပါပြီးသားပါ …ဗိုက်ပူငါးတွေက (အမ) အားကောင်းမယ် အကောင်ကြီးမယ်
အထီးတွေက ညှက်မယ် သို့သော် အမြီး အကွက် ပိုလှမယ်…
သည်တော့ အမ-အထီး …. ၄-၆ အချိုး လောက်ဟာ မျှတ သင့်တော်ဖွယ်ရှိပါကြောင်း ….
လူ့သဘောအရတော့ ဟစ်ပီ ဆန်ချင်ဆန်မပေါ့လေ။… သို့သော် သူတို့က လူမဟုတ်ဘူး…
ငါးဗျ ငါး …. ဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ ဟက်ဘစ်တက်စ် ကို နားလည်ပြီး မွေးမှ အနည်းနဲ့အများ
အကုသိုလ် ကင်းမယ် ဆိုတာ ပြောပြလိုပါကြောင်း…
အထီးမရှိလို့ ..ဗိုက်ထဲမှာ မျိုးဥတွေ များလာ (ဥကျပ်လာပြီး သေရတဲ့) ငါးမတွေကတော့
သနား စရာ အလွန်ကောင်းပါကြောင်း …. အဆင့်နိမ့်တဲ့ သတ္တ၀ါဖြစ်လို့
လူမတွေလို …မန်းစွေးရှင်း လာတာ မျိုး ငါးမှာ မရှိဘဲ …. ဥဥလာတယ် ..အထီးနဲ့မျိုးစပ်တယ်
အကောင်လေး(မျိုးဆက်သစ်)မွေးတယ်… ဒါကသာ … lower animal အမ တွေရဲ့ အသက်ရှင်ရာ
ရှင်ကြောင်း ဖြစ်ပါကြောင်း ….
ရွှေငါး လို့ အများခေါ်တဲ့ …tropical gold fish တွေမှာတော့ မျိုးမအောင်လည်း အမ က
ဥတွေ ဥချပစ်ခြင်းအားဖြင့် ..သူ့အသက်သူ စောင့်ထိန်း နိုင်ပါကြောင်း …သို့သော်…
အစာနှင့်ပတ်သတ်ရင်မူ …မဆာလည်းစား ဆာလည်း စားမို့ …( အစာ အကျွေးလွန်သည့်အခါ
ဗိုက်ကား ၍ သေတတ်ပါကြောင်း…)
ထို့ထက် အဆင့်မြင့်သွားသော ငါးများ …
အိန်ဂျယ်လ် -ဒစ်စကတ်…- ဖလားဝါးဟွန်းများတွင်တော့ အုပ်ထဲ အတူတူနေရင်းမှကို…
ကိုယ့် ကောက်ပယ်လ် couple ကိုယ် ရှာ ကာ တွဲတတ်ပါကြောင်း…
1-1 အနေအထားနှင့်သာ သားပေါက်တတ်ပြီး … ကော်မာရှယ်လ် ဖောက်စားရန် ခက်ခဲပါကြောင်း…
မောထှာ ဗျာ …
နောက်မှ ဒီတေးလ် ရေးတော့မယ်…
အင်းးးးးးး သူမသိတာကို မရှိတော့ဘူး။ ;)
တက္ကသိုလ်စတက်တော့ ဖရက်ရှာဝဲလ်ကမ်းမှာ ပစ္စည်းလေးတွေ မဲနှိုက်ပေးတော့….
(မြန်မာပြည် ထုံးစံအတိုင်း ကိုယ့်အမှတ်နဲ့ ဘယ်လိုင်းဝင်မလဲ ရွေးကြတော့
ကိုယ့်မေဂျာ ဘာနဲ့ဆိုင်တယ် မသိ)
ဆရာကြီးက အခုမဲနှိုက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲမှာ ဆရာတို့ဘာသာနဲ့ မဆိုင်တဲ့ပစ္စည်း တစ်ခုမှ မပါဘူး ဆိုတဲ့ စကားလေးကို ကြားရတော့ အထင်လည်း ကြီးသွားတယ်။ စိတ်ထဲလည်း စွဲသွားတယ်။
အခုလည်း မာကက်တာနဲ့ လွတ်တာ မရှိဘူး ထင်မိတယ်။
မမရေ versatile marketer ဆိုတာ ဒါမျိုးကို ခေါ်တာထင်ပါရဲ့ မမရယ်
ဆူးကတော်တော်လေး ကို ဒုက ကရိကထ ခံနိုင်တာပဲ။ သံယောဇဉ်လည်း အတော်လေးကြီးတယ်မှတ်တာပဲ။ စာတွေပြန်ရေးတာတွေ့လို့ ၀မ်းသာပါတယ်။
ဟုတ်ပ မမ ရေ
မပြောတော့ဘူး။ မပြောတော့ဘူး။ ပြောကိုမပြောချင်တော့ဘူး။
jk နော် ဂီဂီ။ ;-)
သများကို ခနဲ့ဂျဒယ်ပေါ့ …
သများက ဆင်းရဲလို့ ကျောင်းသားဘွ က ငါးဖောက်ပီးရောင်းစားခဲ့ရတာပါ….
ဒါကြောင့် ငါးဆို သိနေတာပါ……
သများ ငယ်ငယ်က အကြောင်းတွေ ပြန်တွေးမိတွားလို့ ……
ဂီဂီ နော် ဂီဂီ တရုတ်ကားထဲမှာ ပြောတာ သိတယ်မလား.. ဟဲဟဲ..
မြန်မာစာ သိုင်းကျမ်းဂိုဏ်းချုပ် မမ က ပြောနေတာ.. သိတာတွေ များနေပြီတဲ့..
အန်တီက တကယ့် ကြာပန်းလည်း သိပ်ကြိုက်ပါတယ်။Lotus Crazy ပါ။
ဒါပေမယ့် စိုက်တာ တစ်ခါမှ တာ ရှည်မအောင်မြင်ဘူး။
အခု အိမ်မှာ ကျောက်ပန်းအိုးနဲ့ တပင် စိုက်ထားတာ ကျီးကန်းတွေ လာလာထိုးကြတယ်။ခြင်ဇကာလေးအုပ်ထားတော့ နေမရလို့ မပွင့်ဘူး။
ခြင်တွေ ပေါက်ကြလို့ ဆူးလိုပဲ ငါး ၂စုံ ထည့်မွေးတော့လည်း တစ်ခြမ်းပဲ့တွေ သေသွားတယ်။
(ဒီစာကို ဂီဂီ မမြင်ပါစေနဲ့)
ပဒုမ္မာကြာ နဲ့ဒေါင်း ငါးပေးမယ်ဆို ယူချင်သေးသား။
ငါးကတော့ လိုချင်သလောက် စိတ်ကြိုက် ပေးမယ် အန်တီ ကြိုက်တာသာ ရွေးပြီး လက်ညိုးထိုးပြီး လာယူနိုင်ပါတယ်။
ပဒုမ္မာကြာ ကတော့ အခု ပျိုးထားတုန်းပါပဲ.. သူက ကြာပန်းလေးပွင့်ပြီး ကြာခွက် ပိစိလေးဖြစ်တဲ့ ယိုးဒယားမျိုး ကို စိုက်ထားတာ အစေ့တွေ ပြန်စိုက်တာ သိပ်မရှင်လို့ အခု ထပ်ပျိုးထားတယ်။ အဆင်ပြေရင် အန်တီ ကို ခွဲပေးမယ်နော်။
ကြာလင်ပန်း အမျိုးကတော့ အရောင် ၃မျိုး ရှိတယ်။ မြေပဒေသာမှာ ၀ယ်ရင် တစ်အိုးကို အနည်းဆုံး ၈၀၀၀ က စပြီး ဈေးဆိုကြတယ်။ အပင်သန်ရင် ၁သောင်းခွဲလောက်တောင်းတယ် ဆစ်လို့ သိပ်မရဘူး။
ငါးအကောင်သေးလေးတွေ သဘာဝ အတိုင်းရှင်သန်နေတာ ဆိုတော့ ငရဲလည်း မကြီးဘူး ထင်တယ်။ သီးသန့် ၀ယ်မွေးထားတဲ့ အကောင်တွေက သေကုန်ပြီး သူတို့က ပေါက်ဖွားတဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေ ဆိုတော့.. ရေစက်ရှိလို့ ရောက်လာကြတာ ဆိုပါတော့.. ဟိဟိ..
သူတို့ အနေနဲ့ စဉ်းစားရင်တောင် ဘေးမဲ့ ဥယျာဉ်ကြီး လို့ ပြောလို့ ရတယ်။
အကုသိုလ် မကြီးအောင် …ဒေါ်ဆူးရေ …
ဒေါင်းငါးဟာ အသားစား ငါး မဟုတ်ပေမယ့်
အကောင်ငယ်လေးတွေကို (အထူးသဖြင့် အထီးတွေက)
ရေတီအမှတ်နဲ့ စားပစ်မိလေ့ ရှိကြတယ်ခည …
အင်း …. မသိလိုက်မသိဘာသာနဲ့ …ငါးလေးဒွေ ဘယ်လောက်တောင်
သေကုန်ပီလဲမသိ … သနားထှာကွယ်…
ဘေးမဲ့ ဥယျာဉ်ဂျီးဆိုပဲ ….
အာပျိုဂျီးများ …တယ်လည်း မီလျံ အကုသိုလ်နိုင်သကိုး …
အခုလဲ……………….. ကြာ နေပြီဗျ
အော်….နောက်များ ငါးမွေးရင် ငါးရံ့တို ငါးခူတို့မွေးပါနော်..
ဆူး က သွားပါတဲ့ ငါးမမွေးဘူး။ ရေထဲ လက်နစ်လိုက်ရင် အခုတောင် ၀ိုင်းတွတ်ကြတာ.. အမလေး.. တော်ကြာ ၀ိုင်းကိုက်လို့ အရိုးပဲ ကျန်မယ်။
ရေထဲ ကနေ အပြင်ကို ကျသွားတဲ့ ငါးလေးတွေကို သနားလို့ မဆုံးဘူး။
အင်္ဂုလိမာလသုတ် ရွတ်ပေးတာလေးကို လဲ သဘောကျလို့ မဆုံးဘူး။
တော်သေးတာပေါ့။ ကြောင်တွေဘာတွေ လာပြီး တီးမသွားတာ။
ကြုံရင် ပုံလေးတွေ နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါဦး။
ရာနဲ့ချီတဲ့ ငါးတွေအတွက် ကြာကန် အကြီးကြီး ဖြစ်နေပြီပေါ့။ :-)
မရေးဘဲ ထားတာ တော်တော် ကြာပါပြီ။
အခုမှ စိတ်ကူးပေါက်ပြီး ရေးတာပါ။
ကြာအိုးတွေကတော့ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အပင်ပေါက်တွေ ကြီးလာလိုက် ပျိုးလိုက် အမေ က အမြင်ကတ်တာနဲ့ လိုချင်တဲ့ သူရှိရင် ပေးလိုက်.. အဲလို လုပ်နေတာ.. ပေးလိုက်တဲ့ လူတွေက ရှင်အောင် မစိုက်နိုင်ရင် အပင်လေးတွေ ကိုယ်တိုင် မသတ်ရက်လို့ သူများကို ပေးသတ်ခိုင်းသလို ဖြစ်နေပြီလို့.. အမေကို ပြောဖြစ်သေးတယ်။
ငါးရှိတဲ့ ကြာအိုးကိုတော့ ကျောက်စည်ပိုင်းနဲ့ အားလုံး ထည့်ထားပါတယ်။ တခြား အိုးတွေကိုတော့ စဉ့်အိုးနဲ့ ထည့်ထားပါတယ်။
အဂုင်္လိမာလသုတ် အစွမ်းကြောင့် ငါးမလေး အသက်ရှင်ရတယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။
ဂီဂီ ပြောသလို ငါးထီးတွေ အများကြီးနဲ့ ထားတဲ့ ငါးမတွေ သေကုန်ကြလို့ နောက်ဆုံး တစ်ကောင် ဖြစ်နေပြီးတော့ သီးသန့် ခွဲ ထားတာတောင် ရေမကူးနိုင်တော့ဘူး။
ဘာလုပ်ပေးရမှန်း မသိပဲ ကောင်းစေချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ တွေးမိတဲ့ စိတ်စေတနာရဲ့ အကျိုးပေးကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အချစ် က ပူတယ် ဆိုတာ အဲဒါ ပြောတာပေါ့ …
ကြာပန်းလေးစ စခဲ့တဲ့ အချစ်က ငါးလေးတွေအထိ တိုးပွားလာခဲ့တယ် …
အဲဒါ သံယောဇဉ် နှောင်တွယ်ရစ်တာပေါ့ …
အင်္ဂုလိမာလသုတ် ရဲ့ အစွမ်းကိုတော့ အံသြမိ …
သို့ပေသိ သဂျီး ကတော့ ငြင်းမှာကား မှန်၏ …
ဤသို့ မန့်မိမန့်ရာ မန့်သွားပါ၏ ….
သဂျီး ငြင်းချင်တယ်ဆို ပြောလိုက်ပါ.. သဂျီး ကိုလိုအပ်ရင် ရွတ်ပေးမယ်လို့ မယုံမရှိ ကိုယ်တွေ့ ကြုံရင်တော့ သိကောင်းပါရဲ့။
… ကလေးမွေးတဲ့.. သမားတော်နဲ့မွေးတယ်..။ မမွေးခင်ကတည်းက.. ဆရာဝန်ဆီပုံမှန်ပြတယ်..။ဆိုတော့…
ယုံသင့်ပါတယ်..။ ဒါဟာ..စိတ်တန်ခိုးစွမ်းအင်တမျိုးဖြစ်ပြီး.. အဲဒီလူရဲ့စိတ်တန်ခိုးဆိုတာက..စွမ်းအင်တမျိုးဖြစ်ပြီး.. အင်မတန်စွမ်းတာမို့.. တကယ်သာထိထိရောက်ရောက်လုပ်ရင်.. ဖြစ်နိုင်ကောင်းမှာပါ…။
ကလေးမွေးတာမှမဟုတ်.. ဘယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာမဆို.. တရားကို..အဓိပါယ်နားလည်ပြီး.. လက်တွေ့ကျင့်ကြံရင်.. အကျိုးရှိတာသေချာပါတယ်..။
ရှေးသုတ္တန်ပုံပြင်တခုမှာ..တောထွက်တရားအားထုတ်ဖို့သွားတဲ့.. ပုဏ္ဏားတယောက် ကြွက်ကလေးကအစပြုပြီး.. သားသမီးတွဲလောင်းနဲ့.. ဖြစ်သွားတဲ့.. အကြောင်း.. ဖတ်ဖူးတယ်မှတ်တယ်..။
လူမှုရေးရာတွေဆိုတာ.. မစလိုက်နဲ့.. စလိုက်ရင်.. အဲလိုနော…။ အဲလို…
စကားမစပ်တစပ် … ငါးကလေးက အစပြုပြီး … အဲလို ဆိုလိုချင်တာ လားလို့ မရဲတရဲ တွေးမိတယ် ဗျာ … အာဟိ .. :-)
ငါးမွေးတာကိုတော့ ၀ါသနာမပါဘူး … အိမ်မှာ ငါးမျိုးစုံမွေးခဲ့ဖူးတယ် … အခုနောက်ဆုံး ဒစ်ကတ်တွေ ရှိတယ် … သူတို့ ၅ ကောင်ရဲ့ ကရိကထတွေက နဲတာမဟုတ်ဘူး … အစာဖိုးကလဲ တော်တော်ကုန်တယ် … ဒါပေမယ့် ကြည့်လို့တော့ လှတယ် …
ဆူးရဲ့ ကြာပန်းပုံလေးတွေလဲ ပြပါအုန်း …
သဂျီးကို ရွတ်မမေးနဲ့နော်။ မတော်လို့ သူ့ဗိုက်ကြီးပေါက်ထွက်လာမှဖြင့် ကျနော်နဲ့သူနဲ့ဇာတ်လမ်း လူသိကုန်မယ်။
အန်တီဆူးက အပျိုဂျီးလို့ မပြောရဘူး..။ သဲကိုသဲတယ်…
ငါးမွေး ငှက်မွေး ဘာကောင်မွေးမွေး အချုပ်အခြယ်နဲ့မွေးလို့ကတော့ အားမပေးဘူးဗျို့…အရှုပ်ထဲက ရှင်းအောင်နေတဲ့….သူများအရှုပ် ကိုယ့်အထုပ် မဖြစ်အောင်နေ၊ နဲနိုင်သမျှနဲအောင်နေ…။ လုပ်သူဖြစ်စဉ် မသိသာပေမဲ့ ခံရသူဖြစ်တော့ အာရိုရို့…ရမ်ပံနပေ ဘေလေဆပ် ဘေလေဆပ်…။
အစ်မဆူးရေ.. ကြာပန်းလေးကနေ … စလိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်း .. အခုဒေါင်းငါးလေးတွေအထိ မမောနိုင်မပမ်းနိုင်နဲ့ .. အတော်အပင်ပန်းခံနိုင်လုပ်နိုင်တာပဲ …. ။ ပန်းလေးတွေ ၊ တိရိစ္ဆာန်လေးတွေကိုကြည့်ရင်း …ကြည်နူးတဲ့ စိတ်ခံစားမှု ရပေမယ့် … သံယောဇဉ်ကတော့ .. ဖြတ်ရအတော်ခက်တယ်နော် … ။
ဒေါင်းငါးတွေက အရမ်းပွားလွယ်တယ် …. အရောင်သွေးလည်း စုံပြီး အမြီးပိုင်းတွေက တလက်လက်နဲ့ အရမ်းလှတယ် …. ။ အရင်က အဒေါ့်ယောက္ခမတွေ ရှင်စောပုလမ်း(၀င်ဆာလမ်း)က သမ္မတအိမ်တော်ဝင်းထဲမှာနေတုန်းက … သစ်ပင်တွေခြံတွေနဲ့ ခြင်ပေါလို့ ..ခြံပတ်လည်ကို ဒေါင်းငါးတွေမွေးထားတာ … ပိုးလောက်လန်းတောင် မမြင်ရတော့ဘူးတဲ့လေ … ။ ဒေါင်းငါးတွေကတော့ .. အရမ်းပွားလွယ်တယ်တဲ့ … ။
ကြာပန်းကတော့ ရေကြည်မှ ပွင့်တယ်လို့ ကြားဖူးတယ် … ကြာထဲမှာမှ အမျိုးမျိုး ရှိကြပြီး ..တစ်ချို့ကြာပန်းတွေ လပြည့်ညမှ ပွင့်တယ်လို့ လည်း ကြာဖူးတယ် … ။
လပြည့်ညမှ ပွင့်တာက ကုမုဒြာ ကြာ ပန်း ပါ။
ဆူး အိမ်မှာ စိုက်ထားတဲ့ ကြာပန်းက ကြာလင်ပန်း အမျိုးအစားမျိုးတွေပါ။
ငါးတွေကိုတော့ ရေထဲမှာ ဆိုတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ မရဘူး။ ကင်မရာထဲမှာ မမြင်ရတတ်ဘူး။